Ithuluzi Elisha Lokulwa Ngokushesha Nezifiso Zikashukela
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Ithuluzi Elisha Lokulwa Ngokushesha Nezifiso Zikashukela
Ishingamu efakwe kusayensi yezitshalo imisa izifiso zikashukela ngemizuzu emibili nje!
Izindaba ezinhle kulabo abahlale bevuma ukuyenga ushukela: Isiqalo sakwa-Israel esimnandi, i-Sweet Victory, Ltd., sidale ulayini omnandi wezinsini zokuhlafuna ezifakwe kwi-botanical eziklanyelwe ukumisa izifiso zokwelashwa okunoshukela emikhondweni yazo.
Ukwakheka kwe-proprietary chewy kusebenza phakathi nemizuzu emibili ngokuvimbela ama-receptors kashukela olimini, futhi umphumela wawo ungahlala amahora amabili. Ngaleso sikhathi ukudla okumnandi noma iziphuzo ezivame ukujabulisa izinzwa zizonambitha kancane noma zibemuncu, futhi umfutho wokuzitika ngoswidi ungancishiswa, uhlale isikhathi eside kunomphumela ongokomzimba.
Ukuthatha I-Sugar Addiction
Ngokusho kwe-Innova Market Insights 'global Health and Nutrition Survey, ngo-2021, u-37% wabathengi bomhlaba wonke bakhombise ukuthi behlise izinga labo likashukela ezinyangeni eziyi-12 ezedlule. Le mizamo ikhombisa umbono owandile wokuthi ukusetshenziswa kukashukela okuphezulu kuyimbangela yezifo ezahlukahlukene, okuhlanganisa ukubola kwamazinyo, ukukhuluphala, nesifo sikashukela. Ucwaningo luphakamise indima kashukela ekwenzeni kusebenze ama-opiate receptors (izikhungo zomvuzo) ebuchosheni, ezingachaza imvelo yawo ekhangayo. I-American Heart Association itusa ukuthi abesifazane balinganisele ushukela owengeziwe ungabi ngaphezu kwezipuni eziyisithupha ngosuku (amagremu angu-24), futhi amadoda alinganisele ushukela ongeziwe ungabi ngaphezu kwezipuni eziyisishiyagalolunye ngosuku (amagremu angu-36).
“Iningi lethu lilwa nezifiso ezimnandi nsuku zonke,” kuphawula uGitit Lahav, isazi sokusebenza kwengqondo esachitha cishe iminyaka eyishumi sicwaninga ngokuhlobana okukhona phakathi kokudla okunomsoco nokokusebenza kwengqondo. U-Lahav wasungula ngokuhlanganyela i-Sweet Victory no-Shimrit Lev, umqeqeshi wezokudla okunomsoco. “Nakuba ukuqwashisa ngomthelela wokuphuza ushukela ngokweqile empilweni yomuntu kukhula, ukukhahlela 'umkhuba' kashukela kuwumshikashika wangempela kweningi lethu. Lokhu yikho okusigqugquzele ukuthi sifune isixazululo esingasiza abathengi ukuthi balawule kangcono ukukhetha kwabo okunomsoco.”
Ngesizinda sabo sesayensi yezitshalo, u-Lahav no-Lev baphendukela endaweni yakudala ye-botanical gymnema yaseNdiya, (i-Gymnema sylvestre) eyaziwa ngesiko le-Ayurvedic ngomthelela wayo omuhle kumetabolism ye-glucose. E-India, yaziwa ngokuthi “i-gurmar,” isi-Hindi elisho “umbhubhisi kashukela.” Kuthiwa ivimbela ukumuncwa kukashukela ngaphezu komphumela wawo olimini. "Ukuhlelwa kwe-athomu yama-molecule e-bioactive gymnemic acid empeleni kufana nalokho kwama-molecule e-glucose," kuchaza uLev. "La ma-molecule agcwalisa izindawo zama-receptor ku-taste buds futhi avimbele ukwenziwa kusebenze ama-molecule kashukela akhona ekudleni, ngaleyo ndlela anqande ukulangazelela ushukela."
E-India, amaqabunga e-gurmar ayahlafunwa ukuze enze umphumela. “Kusithusile ukuthi lokhu kusebenza ngokushesha kangakanani,” kuphawula uLev. "Sifune indlela esebenza ngempumelelo, ejabulisayo, nefaneleka kakhudlwana yokulethwa kwalesi sitshalo, ngakho-ke sazimisela ukunqoba ukunambitheka kwalo okubabayo." Laba ababili bazame izindlela zokupheka zokuzenzela ushingamu ekuqaleni, besebenzisa izinto zokwenza izinsini zasekhaya. Babe sebehlanganisa amasu nolwazi lwabo lokudla okunempilo ukuze bathole iresiphi efanelekile besebenzisa izimuncumuncu zemvelo ezimbalwa ezikhethiwe. Ifomula yaphinde yapheleliswa ngosizo lomkhiqizi ohamba phambili wama-confectionary wakwa-Israel. Namuhla, kulandela ukutholakala kwamaqabunga e-organic gymnema e-India, inkampani yokuqala ikhiqiza inhlaka yezitshalo endaweni yase-Italy egunyazwe ukukhiqiza izithasiselo ezisebenzayo futhi itholakala ngezinambitheka ezimbili: i-peppermint, ilamula kanye nejinja.
Impilo Italy Ucwaningo
Iningi labantu baseMelika Abathintekile Bagunyaza I-Psychedelics Ukwelapha Izifo Zengqondo
Ukukhiqizwa Okukhudlwana Kwe-Oral COVID-19 Antiviral...